Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.5.3 Gamification
Nnyocha nchịkwa ndị na-agwụ ike maka ndị so na ya; nke nwere ike ịgbanwe, ọ ghaghị ịgbanwe.
Ka ọ dị ugbu a, agwara m gị banyere ụzọ ọhụrụ ị ga-esi na-arịọ ka ndị na-agba kọmputa na-eme ka ọ dị mfe. Otú ọ dị, otu akụkụ nke mkparịta ụka ndị a na-eme na kọntaktị bụ na ọ dịghị mmadụ nyochaa mmadụ iji nyere aka ma nọgide na-ekere òkè. Nke a bụ nsogbu n'ihi na ọtụtụ nyocha na-ewe oge ma na-agwụ ike. Ya mere, n'ọdịnihu, ndị na-eme nnyocha na-aga ịmepụta ndị ha sonyere ma mee usoro nke ịza ajụjụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ na egwuregwu. A na - akpọkarị usoro a gamification .
Iji gosi ihe nyocha a na-atọ ụtọ, ka anyị tụlee ihe enyi, otu nnyocha e mere na egwuregwu dị na Facebook. Sharad Goel, Winter Mason, na Duncan Watts (2010) chọrọ na-eme atụmatụ otú ihe ndị na-eche na ha dị ka ndị enyi ha na otú ihe ha bụ n'ezie dị ka ndị enyi ha. Ajụjụ a banyere ọdịdị yiri nke a na-ahụ anya na-enweta ozugbo na ikike nke ndị mmadụ iji ghọta ebe ha na-elekọta mmadụ na-enwe mmetụta maka itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbanwe nke mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọdịdị dị adị na nghọta bụ otu ihe dị mfe iji tụọ. Ndị nchọpụta nwere ike ịjụ ọtụtụ ndị mmadụ banyere echiche ha wee jụọ ndị enyi ha banyere echiche ha (nke a na-enye ohere maka mmụba nke nkwekọrịta nkwekọrịta n'ezie), ha nwere ike ịjụ ọtụtụ mmadụ iji maa àgwà ndị enyi ha (nke a na-enye ohere maka nhapụta nke nkwekọrịta nkwekọrịta chere ). O di nwute, ọ bụ ihe siri ezigbo ike ịjụ ajụjụ ma onye enyi ya. Ya mere, Goel na ndị ọrụ ibe gbanwere nnyocha ha n'ime ngwa Facebook nke na-atọ ụtọ ịkụ egwu.
Mgbe onye soro kwadoro ịbanye na nchọpụta nchọpụta, ngwa ahọrọ otu enyi site na akaụntụ Facebook ahụ onye zara ma jụọ ajụjụ banyere àgwà enyi ahụ (nọmba 3.11). N'ịgbakwunye ajụjụ banyere ndị enyi a na-ahọpụtaghi aka, onye ahụ zara ajụjụ zara ajụjụ banyere onwe ya. Mgbe ịzachara ajụjụ gbasara enyi gị, a gwara onye ahụ zara ma azịza ya ziri ezi maọbụ, ọ bụrụ na enyi ya azaghị ya, onye ahụ zara ajụjụ ahụ nwere ike ịgba enyi ya ume isonye. N'ihi ya, nchọpụta ahụ gbasaa n'ụzọ ụfọdụ site na ịmalite ịrịa ọrịa.
Nyochaa 3.11: Usoro okwu site na ọmụmụ Enyi (Goel, Mason, and Watts 2010) . Ndị nchọpụta ahụ tụgharịrị nchọpụta ihe ngosi dị iche iche na-atọ ọchị na egwuregwu. Ngwa ahụ jụrụ ndị nabatara ma ajụjụ siri ike na ajụjụ ndị nwere obi ọkụ, dịka nke egosiri na mbido a. Ihu enyi na-eche ihu nke ọma. Edeghachiri ya site na ikikere nke Sharad Goel.
Ajuju ajuju ajuju sitere n'aka General Social Survey. Dịka ọmụmaatụ, "Ọ bụ [enyi gị] ka ya na ndị Izrel na-emekọ ihe karịa ndị Palestaịn nọ n'ọnọdụ Middle East?" Na "Ndi enyi gị ga-akwụ ụtụ dị elu maka gọọmentị inye nlekọta ahụike zuru ụwa ọnụ?" N'elu ajụjụ ndị a dị mkpa , ndị na-eme nchọpụta jikọtara ajụjụ ndị nwere obi ụtọ: "Enyi gị ọ ga - aṅụ mmanya na - aba n'anya biya?" na "Enyi gị ọ ga - enwe ike ịgụta uche, kama inwe ike ịgba ụgbọ? usoro ndị ọzọ na-atọ ụtọ maka ndị na-eso ya ma nyekwara ha ihe atụ na-adọrọ mmasị: ọ ga-abụ nkwekọrịta nkwekọrịta maka ajụjụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị oke mkpa nakwa maka ajụjụ obi jụrụ banyere ịṅụ mmanya na ndị na-aṅụbiga mmanya ókè?
E nwere ihe atọ kacha pụta site n'ọmụmụ ihe ahụ. Nke mbụ, ndị enyi nwere ike ịza otu azịza ahụ karịa ndị ọbịbịa, mana ọbụbụ ndị enyi dị mma ka na-ekwenyeghi banyere ihe dị ka pasent 30 nke ajụjụ. Nke abụọ, ndị na-aza ajụjụ mejupụtara nkwekọrịta ha na ndị enyi ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọtụtụ n'ime echiche dịgasị iche n'etiti ndị enyi anaghị achọpụta. N'ikpeazụ, ndị na-eso ya nwere ike ịma na ha na ndị enyi ha na-ekwenyeghị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka okwu gbasara obi ụtọ na ịṅụbiga mmanya ókè.
Ọ bụ ezie na ngwà ahụ adịghị njọ maka ịkụ egwu, ọ bụ ihe atụ dị mma nke otu ndị na-eme nchọpụta nwere ike isi gbanwee nyocha ihe omume dịka ihe na-atọ ụtọ. N'ikpeazụ, na ụfọdụ ọrụ creativity na imewe, ọ ga-ekwe omume ịmezi ahụmịhe ọrụ maka ndị na-eme nnyocha. Ya mere, oge ọzọ ị na-eme nnyocha, wepụta oge chee echiche banyere ihe ị nwere ike ime iji mee ka ahụmịhe ahụ dịkwuo mma maka ndị so gị. Ụfọdụ nwere ike na-atụ egwu na usoro ndị a maka ịlụ ọgụ nwere ike imerụ njirimara data, ma echere m na ndị ọrụ nkwụnye ahụ na-etinye aka n'iche data.
Ọrụ nke Goel na ndị ọrụ ibe ya na-egosipụtakwa isiokwu nke ngalaba na-esote: ijikọta nyocha na nnukwu ihe ọmụma data. N'okwu a, site n'ịjikọta nnyocha ha na Facebook ndị na-eme nchọpụta na-akpaghị aka na ndepụta nke ndị enyi ha. Na ngalaba na-esote, anyị ga-atụle njikọ dị n'etiti nyocha na nnukwu ihe ọmụma data n'ime nkọwa zuru ezu.